Fandaharana naato - Tsy mankasitraka ny holafitry ny mpanao gazety sy ny firaisamonim-pirenena
Fandaharana naato – Tsy mankasitraka ny holafitry ny mpanao gazety sy ny firaisamonim-pirenena
Publié avril 26, 2021 par Book News
Niteraka adihevitra ny didy navoakan’ny ministera ny 22 Aprily 2021 mahakasika ny fanafoanana fandaharana sasany amin’ny haino aman-jery. Namoaka fanambarana ny holafitry ny mpanao gazety sy ny firaisamonim-pirenenana ny 24 Aprily ho fitakiana ny fahafahan’izy ireo miasa sy maneho hevitra ankahalalahana.
Fitakiana ny fahazoana maneho hevitra ankahalalahana
Mitaky ny fanafoanana ny didy navoakan’ny ministera ny 22 aprily lasa teo ny holafitry ny mpanao gazety sy ny firaisamonim-pirenena. Didy izay mandrara ny fandehanan’ny fandaharana politika sy adi-hevitra politika, ara-toekarena ary sosialy amin’ny haino aman-jery indrindra amin’ny faritra sasany eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin’izany ny faritra Analamanga, Atsinanana, Boeny, Sava ary faritra Sofia.
Didy navoakan’ny Ministera ny 22 Aprily 2021. cc: Facebook
Fandaharana sivy no naato nanomboka ny zoma lasa teo: « Aoka Hazava » (Viva Radio), « Anao ny Fitenenana (Free Fm), « Tambatra iara-manonja tena izy » (Viva Radio, Viva TV, Free FM, Alliance FM, Taratra FM, Kolo TV, Kolo FM), « Miara Manonja » (MBS, AZ, Soa Radio), Kapotandroka (IBC), Invité du Jour (Real TV), « Ca me dit » (RTA), « Don-dresaka » (TV Plus), « Rivotra » (RDJ). Ireo dia voalazan’ny fanjakana fa manoitohina ny filaminam-bahoaka mandritra izao hamehana ara-pahasalamana izao.
Anisan’ireo fandaharana voakasik’izany ny Kapotandroka sy ny Tambatra. cc: Facebook
“Foàno ny fanapahan-kevitra mampanjaka firehan-kevitra tokana mirona mankany amin’ny didy jadona”.
Nanambara ny holafitry ny mpanao gazety sy ny firaisamonim-pirenena fa tsy tokony ho fitaovana entina hanampenam-bava sy sofina ny hamehana ara-pahasalamana. Manana zo haneho hevitra sy hahazo vaovao ny olon-drehetra ary zo sy adidin’ny haino aman-jery ihany koa ny maneho hevitra malalaka sy mampahalala vaovao araka ny voadidin’ny andininy faha-10 sy faha-11 ao amin’ny lalàmpanorenena Malagasy. Voafaritra ihany koa ao anatin’ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona (DUDH) izay nataon’ny firenena malagasy sonia : And 18. Ny olona rehetra dia manana zo hieritreritra sy handinika.
And 19. Ny tsirairay dia manana zo hanana sy haneho ny heviny, tsy azo sakanana sy tohinina ny fanehoan-kevitry ny tsirairay, ary zony ny mikaroka, mandray sy manapariaka ny antontam-baovao azony sy ny heviny na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana.
Noho izany dia mitaky ny fahazoan’ny haino aman-jery hanao ny asany sy hamelàna ny olom-pirenena aneho ny heviny sy hahafantatra firehan-kevitra samihafa izy ireo.
Tsy mahazo rariny ny fitondrana
Notsindriny fa ady iraisana ny Covid-19. Mbola ny fisian’ny loharanom-baovao, ny fanomezana sosokevitra, ny tsikera ary ny ady hevitra no ahafahan’ny mpitondra sy ny mpiantsehatra rehetra ary ny olompirenena mandray fanapahan-kevitra ka manova ny fihetsiny amin’ny ady amin’ity valan’aretina ity. Mitohy ny fiainan’ny Malagasy na dia eo ary ny hamehana ara-pahasalamana, na ara-politika na ara-toekarena ary izany dia tanterahina ao anatin’ny fifanajana tanteraka sy ny fitandroana ny fepetra ara-pahasalamana.
Manentana ny olompirenena sy ireo mpiantsehatra rehetra eto an-toerana izy ireo mba handray andraikitra manoloana ity fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin’ny demokrasia malagasy ity. Etsy ankilany, nanao fanambarana ihany koa ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi) izay mangataka ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena miaro ny zon’olombelona (CNIDH) sy ny Filankevitra avo momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny lalàna mifehy (HCDDED) ny fijerena io didy navoaka io. Ny haino aman-jery sasany kosa dia nametraka fitoriana amin’ny filankevi-panjakana hanohitra ity fanapahan-kevitra ity, izay heverin’izy ireo fa fanararaotam-pahefana tanteraka.
Publié dans Malagasy et Politique